ရှညောသား: June 2018
ဒီတခါတော့ ကြက်ဟင်းခါးသီးအပုသီးလေးတွေကို ငါးနီတူခြောက်နဲ့ကြော်ချက်ချက်စားဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ချောင်းဘေးကချုံတွေပေါ်မှာအလေ့ကျပေါက်ပြီးသီးပါတယ်။ရေခပ်ရင်းချုံထဲတိုးပြီး ကြက်ဟင်းခါးသီးခူးရတာပျော်စရာကောင်းတယ်။မြွေစိမ်းလည်းကြောက်ရတယ်း) ဒီမှာတော့ဈေးထဲမှာ
လေးစိတ်ခွဲ ဆားအနည်းငယ်ထည့်ပြီးပျော့သွားအောင်နယ်ထားလိုက်ပါတယ်။ချက်မည့်ဒယ်အိုးထဲကို ဆီအနည်းငယ်ထည့်ဆီပူလာတော့၊ကြက်သွန်နီတစ်လုံး၊ခရမ်းချဉ်သီးနှစ်လုံးပါးပါးလှီးထည့်နနွင်းမှုန့်၊ ငါးပိသင့်တော်ယုံထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ။ဆီသတ်တာမွှေးလာရင်ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ငရုတ်သီးထောင်းထားတာ
ကြက်ဟင်းခါးသီးဟင်းကိုဗူးသီးဟင်းချို သို့မဟုတ်အသီးအရွက်ဟင်းချိုတမျိုးမျိုးနဲ့တွဲပြီးစားလို့ကောင်း ပါတယ်။အချဉ်ရည်သောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ အခါးစားပြီးအချဉ်သောက်ရင်ပိုပြီးခါးပါလိမ့်မယ်း)
နောက်ဟင်းတခွက်ကတော့ဖရုံညွှန်ကိုဗူးသီးနုတလုံးနဲ့ရော ပင်စိမ်းရွက်အုပ်ပြီးကြော်ထားပါတယ်ဗျး)
ဟင်းခွက်အားလုံး တခါတည်းချက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ချက်စားဖြစ်တုန်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာမို့ တခါတည်းတင်လိုက်တာပါး)
ကျောင်းမှာအလုပ်များတဲ့အခါ ဟင်းချက်ဖို့ဝေးစွ သူများချက်ပြီးသား ဝယ်စားဖို့ကိုအချိန်မရပါဘူး။တနေ့လုံးမှ ထမင်းတနပ်နဲ့ပြီးရတာလည်းရှိတယ်။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, June 30, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒုတိယအကြိမ် စကားဖြူပန်း ကပ်လှူခြင်းကုသိုလ်
အညှာလေးတွေကိုရေစိမ်ပေးထားတော့ သုံးရက်လောက်ခံပါတယ်။ကျောင်းကပြန်လို့ အခန်းတံခါးဖွင့် လိုက်ရင် ပန်းရနံ့ကမွှေးကြိုင်နေတာပါပဲ။
ကျောင်းသွားရင်း သဘောကျလို့ ဖုန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာ
ကျောင်းဖွင့်ချိန် စိန်ပန်းတွေလည်း မြေမှာကြဲပြန့်နေ
ကျောင်းသွားလမ်းဘေးမှာ ပွင့်နေတဲ့ သစ်ခွ
ကျောင်းဝန်းထဲက သစ်ပင်တော်တော်များများမှ အခုလို သစ်ခွတွေ ပွင့်နေတာကို မြင်ရတာစိတ်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်း)
ကျောင်းထဲကညနေပိုင်းတရက်ခြားဖွင့်တဲ့ ဈေးလေးက ပန်းပင်ဆိုင်မှာရောင်းနေတာ ဝယ်ချင်သော်လည်းထားစရာနေရာမရှိလေတော့ ပုံပဲရိုက်ထားတယ်း)
ဒီပန်းကတော့ ဒေလီယာ ပန်းပင်ထင်တာပါပဲ သေချာတော့မသိပါဘူးး)
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, June 23, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Monday, June 11, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
သီးချင်းထဲမှာတော့ ဗူးသီးနုနုမခူးရ လို့ကြားဖူးတာပဲး)
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 08, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
photo credit >>>> google images
အောင်စာရင်းမှာထိပ်ဆုံးကပါနိုင်အောင်အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်း အညာသားရဲ့ ကျောင်းသားဘဝနောက်ကြောင်းပြန်ခြင်းကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဗျာ။
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, June 02, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
photo credit>>> google images
တာကလည်းတနှစ်လုံးမှကံကောင်းရင်နှစ်ခါလောက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကားသမားတွေကကျောင်းသားတွေ တင်ရတာအန္တရာယ်များလို့မတင်ချင်ကြဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတော့ကျနော်တို့တစ်တွေလည်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်း ၉၆၉၃
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, June 01, 20180comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook